सडक, सिँचाइ, खानेपानी र कृषि प्राथमिकतामा
दैलेख । कर्णाली प्रदेश सरकारले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा चालू आवका लागि रू. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश गरिएका योजनाअनुसार यस क्षेत्रको सडक, सिँचाइ, खानेपानी र कृषिक्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीका अनुसार बजेटको प्राथमिकतामा १० ओटा सडक परेका छन्, जसमा कोप्चकट्टी रूम हुँदै चौराठा जोड्ने सडकमा रू. १ करोड ६० लाख, सान्तडा मेहल्तोली, पातिकाँल्ला जुनिचाँदे हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडकमा रू. २ करोड ६० लाख, चुप्रा जस्रिचोक सेमाकोट, कुइँयाताल, शिवद्वारी, बडाभैरव घोडादाउना हुँदै चिपन्तडा जोड्ने सडकमा रू. २ करोड विनियोजन भएको छ । बाँकी ७ सडकका लागि रू. ३ करोड छुट्याइएको छ ।
यस्तै, खानेपानी तथा सिँचाइ कुलो निर्माणतर्फ साना–ठूला गरी ३६ योजना समावेश गरिएको छ, जसमा दुई योजनाको चालू आवमा डीपीआर तयार पारिनेछ भने दुई योजना सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी सबै योजना सञ्चालनका लागि रू. ६ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । चार लिप्mट खानेपानी योजनाका लागि रू. ८५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ । यस्तै पाँच पुल निर्माणको योजना पनि समावेश छन्, जसअन्तर्गत तीन पक्की र दुई झोलुंगे पुल रहेका छन् । यसका लागि रू. २ करोड ७ लाख विनियोजन भएको छ ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाको बेस्तडा बजार र कट्टीखोला, राँस गाउँपालिकाका लामतडा चोरखोला, उगाडा लालीखोला, रतिखोला र डुंगेश्वर गाउँपालिकाको लोहोरे खोलामा तटबन्ध गरिनेछ । यसका लागि रू. १ करोड ५ लाख बजेट परेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लागि रू. २५ लाख छुट्ट्याइएको छ ।
शिक्षातर्फ पाँच मावि र दुई आधारभूत विद्यालय समावेश छन्, जसमा गुराँस गाउँपालिकाका शान्ति मावि, लक्ष्मी मावि र पार्वती माविलाई रू. ९० लाख, डुंगेश्वर गाउँपालिकाका जनकल्याण मावि सेर्माकोट मावि र जनक आधारभूत विद्यालयलाई रू. ७० लाख र भगवतीमाई गाउँपालिकाको ज्वाला मावि बेस्तडा नेरा आधारधूत विद्यालयलाई ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि पकेट क्षेत्र स्थापनाका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकामा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख छुट्याइएको छ ।